पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप १ हजार ८७५ जनामा कोरोना संक्रमण, काठमाडौँ उपत्यकामा कति ? - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप १ हजार ८७५ जनामा कोरोना संक्रमण, काठमाडौँ...
पछिल्लो २४ घन्टामा नेपालमा थप १ हजार ८७५ जनामा कोरोना संक्रमण, काठमाडौँ उपत्यकामा कति ?
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ८७५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार यस अवधिमा थप १० हजार ६६ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो ।
कोरोना परीक्षण गरिएकोमध्ये १ हजार ३१० जनाको पिसिआर र ५६५ जनाको एन्टेजिन विधिबाट कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यस्तै, यस अवधिमा थप २ हजार १६४ जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् । योसँगै निको हुने संक्रमितको संख्या ६ लाख ३० हजार ४०७ पुगेको छ ।
यसैगरी बितेको २४ घण्टामा २१ जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको कूल संख्या ९ हजार ५२७ पुगेको छ भने हाल नेपालमा कोरोना निको हुने दर ९४.७ प्रतिशत रहेको छ ।
कूल ६ लाख ६५ हजार ८८६ जनाको पिसिआर र ४८ हजार ३६२ जनाको एन्टेजिन विधिबाट कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा हाल नेपालमा २५ हजार ९५२ जना संक्रमित संक्रमित रहेका छन् । गत २४ घण्टामा काठमाडौँमा २९९ जना, ललितपुरमा ७७ जना र भक्तपुरमा ५२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
Previous articleछोराको कुटाइले बाबु ठहरै
Next articleउज्जवल थापाको उपचारका लागि उठेको रकम तथा खर्च सार्वजनिक